Hantidhawrka Furan ee 'MediaLight Open Box' - Iftiiminta eex MediaLight
Bogga ugu weyn Miisaaniyadda Furan ee MediaLight
Keydso ilaa $ 20.00 Save $ 12.00
wax soo saarka.waydayaasha.hoose_variant MediaLight Mk2 - 2 Meter Version - $ 60.00 MediaLight Mk2 - 3 Meter Version - $ 57.95 MediaLight Mk2 - 4 Meter Version - $ 64.95 MediaLight Mk2 - 5 Meter Version - $ 74.95 MediaLight Mk2 - 6 Meter Version - $ 84.95 Ideal-Lume Pro oo ay leedahay MediaLight Desk Lamp - $ 79.95
MediaLight Mk2 - Nooca 2 Meter MediaLight Mk2 - Nooca 3 Meter MediaLight Mk2 - Nooca 4 Meter MediaLight Mk2 - Nooca 5 Meter MediaLight Mk2 - Nooca 6 Meter Ku habboon-Lume Pro by Siraaj MediaLight Version
Dhammaan unugyada Mk2 ee lagu iibiyay boggan waa unugyo tijaabo ah. Waxaan ka tijaabinnaa cutubyo aan kala sooc lahayn kartoon kasta si aan u cabbirno. Kuwani maahan soocelin macaamiil ama dib-u-celin, hase yeeshee shaabadda sanduuqa waxaa jebiyey shaqaalaha MediaLight.
Haddii aanaan u haynin qaabkaaga sanduuqa furan, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad iska hubiso midkeenna cusub Kala duwanaanta wax soo saarka LX1 Eex. LX1 tirtirayaa wax kasta oo kale oo ka mid ah qiimaheeda (qiyaastii 1/3 qiimaha MediaLight), oo leh CRI 95, ISF-shahaado iyo saxnaan xad dhaaf ah.
Waxaan sidoo kale iibinaa soo-celinta macaamiisha ee dib loo cusbooneysiiyay waqti-ka-waqti. Qeybahaas waxaa lagu calaamadeyn doonaa sidii [Refurb] magacooda wax soo saar.
Qaybaha sanduuqa furan:
Ku dar isla 5 sano oo dammaanad ah cutubyadeenna aan la furin
Ku jiraan xaalad wanaagsan-sida-cusub
Ma yihiin hab fiican oo lagu keydsado xoogaa lacag ah adiga oo naga caawinaya in aan bixino siyaasad ku-soo-celin iyo is-dhaafsi dabacsan
Fadlan tixraac sharaxaadda sheyga ee ku saabsan "cutubka cusub" bogagga sheyga shaqsiyeed haddii aad iibsaneyso cutubka sanduuqa furan. Halbeegga sanduuqa furan waa isku mid dhinac walba. Haddii xabagta xariijimaha loo yaqaan 'strip' sida horay loogu isticmaalay, uma qalanto sidii sanduuq furan; kaliya nalalka 'MediaLight Bias Lights' oo ku jira xaalad "cusub".
Balanqaadka aan kuu qabaneyno ma dhamaan doono ka dib markaad iibsato MediaLight. Waxay ka badantahay 5-ta sano "wax walboo ka kooban waa la daboolay" dammaanad.
Waa maxay qabashada? Waxaan rabnaa inaad aad ugu faraxdid tayada badeecada iyo adeegga soo laaban doona si loogu daro nal badan TV walba iyo soo bandhigida gurigaaga iyo xafiiskaaga, lagana yaabo inaad xitaa u sheegto saaxiibo kooban.